Lutho azizwa buhlungu esengeziwe noma yimuphi umuntu kunanoma ushintsho. Cabanga ukuthuthela endaweni entsha, ukushintsha imisebenzi noma ezinye izinguquko global empilweni yakho. Ngokuvamile, sabe sesikulungele ukuba sihlupheke noma yikuphi ukukhathazeka, uma konke kuphela kwaba njengakuqala. Yingakho kukhona isisho esithi "ukuzinza -. Kuwuphawu amakhono" Kusho lesi sitatimende ubani umbhali, kuyacaca ukuthi yonke imikhakha yempilo? Thina ukwandisa lesi sihloko lesi sihloko.
Lapho benza leli zwi
Ubani wokuqala wathi wokwenza umsebenzi omkhulu: "Ukuzinza - uphawu amakhono"? Quote lokhu ingeyona oyedwa, futhi uvele sixties ngasekupheleni phakathi abasubathi wendawo. Thanda namuhla, lo mdlalo futhi yezemidlalo lokho ababekufezile kwakwenziwa kuyancomeka ngumbuso kanye ngamunye, ngakho abadlali abehlale abonisa imiphumela emihle, waletha izindondo zwe futhi indawo yokuqala enkundleni ngamazwe. Ukuzinza muhle ukusebenza yena, uma ngokushelela futhi eyeka, kancane futhi ngokuqinisekile lihamba up, kancane kancane ethuthuka.
It kuvela ukuthi ezemidlalo, amaphesenti ayikhulu kweqiniso ukuthi ukuzinza - uphawu amakhono. Quote, umbhali kabani ayaziwa, futhi isetshenziswa namuhla wenkhulumo nalokubhaliwe. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi silungile ukuba zonke izici zokuphila? Ngempela zonke ukungaguquguquki kangcono? Ake sizwe okuyinto kangcono - iletha nokuzinza?
amakhono kanye ngemvume isilinganiso esisodwa - ngijabula
Yiqiniso, ngeke ukwazi ukudonsa wonke shayela efanayo, kodwa abantu abaningi bathambekele ukuzinza. Yilokhu sithola ngokuqinisekile lokho esingakulindela. Ukuzinza - uhlobo zokuphepha net ukuphila.
ukuthi ukuzinza okuhle konke, noma has nezihibe? Yiqiniso, zikhona izinzuzo nezingozi kulesi sifundazwe. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi iyini ukhethe ukuphila bona, kubalulekile uzizwa ukhululekile futhi ethokomele.
Umuzwa ukuzinza ebusheni babo
Cabanga ethi "ukuzinza - uphawu wokwenza kahle ngokwedlulele" e umehluko okuqonda ngenxa yobudala babo. Thatha umfana engamashumi amabili umuntu omusha eduze engamashumi amathathu. Umehluko yobudala akuyona omkhulu kangaka, kodwa lokhu lapho imiqondo delimiting futhi umqondo okuhle futhi yini kungahlali ukuphila. Youth libhekene iletha. Ngingathanda ukubona izwe, lokuzibusa, ukuqonda ukuthi yini futhi kanjani zidlule. Kufika engamashumi amabili, njengoba umthetho, faka kalula uthando, ubelethe ukuthandana, ukuphila kubonakala ngokugcwele amathuba. Mhlawumbe omunye aphume kuphela eziyishumi intsha uzovuma ukuthi ukuzinza - uphawu amakhono. Owathi Okwamanje ukuthi into embi? Ngokuphambene nalokho, intsha nabangenakho enhle ukuya, kubonakala sengathi kungenzeka ukuze anqobe izwe, futhi zonke kuyoba njengoba ufuna. Le nkolelo ibuye zokuphila uvame ukubizwa ngokuthi boyish. Futhi pragmatism ke esikhundleni kaningi ngoba kuvela ukuthi ukuphila ngisho simple, futhi akusho ngaso sonke isikhathi ukufanisa okulindele ephathelene nezinto ezingenzeka.
Ubuhlobo ukuzinza ngeminyaka
Quote "ukuzinza - uphawu amakhono," okusho ukuthi umbono kuzuzisa njalo, kuba eduze nathi isikhathi. Ngemuva kweminyaka engamashumi amabili, ngokuvamile kakhulu intsha ibhekene nokukhungatheka.
Lapho ngineminyaka engu-esikoleni, sizibheka ngendlela izinkanyezi, abahambi, babhali, bahlatiyi, abaculi. Amaphupho ukuthi umuntu ngomsebenzi we umphathi wehhovisi noma umthengisi esitolo? Iminyaka engamashumi amabili, abaningi kakade kufana nokuthi uzama ku ensimini yakho akhethiwe bese ngiyabona ukuthi amaphupho kungukuthi fated ukuba igcwaliseke. Noma ezimiselwe, kodwa udinga omningi, futhi kungakhathaliseki ukuthi kuzoba khona iphupho wagcwalisa - alaziwa. Phakathi naleso sikhathi, kuyoba ezifiselekayo ukudla, okokugqoka, imali bayozwa futhi hhayi esibhakabhakeni. Ama-Akhawunti wadida ukukhetha umsebenzi, kodwa kukhona akuzona zonke kaseyili ithafa, ngithole umsebenzi omuhle akulula. Uma kutholakala, okungukuthi, ukwesaba ukulahlekelwa ke. Ngenxa yalokho, maqondana ukusebenza ibuphi ubudala ngokuzethemba bathi "ukuzinza - uphawu amakhono."
Ukuzinza mayelana yesimo somshado
Naphezu umehluko bezibona emhlabeni, iningi lamadoda nabesifazane uthanda ukungaguquguquki mayelana ubudlelwano siqu nobudlelwane ukwehluka. Kulula ukuchaza. Cabanga ukuthi ngolunye uhlangothi esikalini - umuntu onothando nokuqonda, indlela emisiwe ukuphila, izimo zokuphila esikahle futhi zikhululekile, ukufana kwamazwi izithakazelo kanye esiyikhethayo. Ngakolunye uhlangothi - isamba okunjalo enkulu lezihambi kungaletha injabulo, kodwa kungase ukudanisa. Abantu abaningi abakwazi ukukhetha umlingani oyedwa ukuphila nje ngoba abakwazi ukuthola umuntu okwakuyoba "enhle" indlela yabo. It kuvela ukuthi cishe ubuhlobo bomuntu siqu obuseduze quote "ukuzinza - uphawu amakhono" by podgadat ezifanele. Abantu abaningi bacabanga injabulo ukuthola umuntu ongamthululela ngokuphepha futhi ngenjabulo ukuphila futhi aguge ndawonye.
Manje isitatimende ngempela imfashini "ukuzimela ngokwezimali". La mazwi basondela isithombe esinjalo - uvuka uma ufuna abenza izinto zakho ozithandayo, futhi umsebenzi wakho kuthatha amahora ambalwa ngosuku futhi kuletha izinkulungwane nyangazonke. Ngakho ngokuvamile ekhangwa Izinhlelo zomasikhuphulane nezinye imikhonyovu ukwenza imali - hhayi wena, futhi, yebo. Kodwa akubona bonke ngakho elula. Zikhona ongakhetha ngempela ukusebenza ukuzimela - isibonelo, ukuvula isitolo sezinto, ukusebenza kahle, ukuheha abathengi, bese nje watch njengoba ibhizinisi lakho kuchuma. Lezi ongakhetha zimbi ngoba "ayishise" - ubeka imali eningi futhi yimali umsebenzi disparate bese kukhona ngenxa wayefisa noma cha - ayikaziwa. Kulokhu, akukho lapho ukuqinisela wengeniso futhi umphumela akakwazi ukukhuluma, kodwa ngenxa quote "ukuzinza - uphawu amakhono" akulungile.
Ngaphezu kwalokho, abanolwazi olunzulu ngezinto nokuzimela ngokwezimali, umphathi ukuqeqeshwa kwakho okuye, kunalokho, ukunikela ukuyeka ukuzinza kokubili element elimazayo okuphumelela futhi ungesabi bagxuma maelstrom yokungaqiniseki. Leli akulona kukho okubi - nje bamba ke alulona olwawo wonke umuntu. Uma ungenayo i-acumen ibhizinisi, uma udinga ngisho ngemali encane ayeyithola, kodwa uqinile, kungcono ukubheka umsebenzi evamile ngoba esethole ongcono.
Umlingisi Oleg Dolin. Biography. Photo.